Kufambira Mberi kweYunivhesiti »Hodges University
Kubvuma - Mangwana Hawks
Ruzivo rweMari reMudzidzi
Kusiyana muHurumende Ed
Nyowani Mudzidzi Kudzidziswa
Yazvino Kosi Catalog
Kunyoresa Mitemo uye Mamiriro
Dzidza Nezve Vashandi Vedu
Basa Rokuwana Mikana
Kufambira Mberi kweYunivhesiti
Basa redhipatimendi reUniversity Advancement nderekudziridza hukama nealumni, shamwari, nenharaunda huru mukutsigira chinangwa chechikoro ichi chekugadzirira vadzidzi kuti vawedzere kudzidza kwakakwirira mukuita kwavo kwega, kwehunyanzvi, uye kwehukama. Ivo vanobatana neHodges University vanonzwisisa kuti chikoro ichi chakasarudzika zvechokwadi. Iyo inharaunda inoshamisa inoshamisa izere nevanhu vane zvakasiyana siyana zvido uye mabasa.
Pano, hapana nzira mbiri dzakafanana.
Asi zvakadaro, chinhu chimwe chete chinotsanangudza dunhu redu, ibasa rakaoma uye chishuwo chekuita zvinhu zvikuru, kufambira mberi, nekuzvigadzirira hupenyu huri nani, hwemhuri, uye nenharaunda.
Paunenge uchinge wakabatana neHodges University, mucherechedzo wakajeka wekuti iwe uri mutungamiri anogamuchira grit yechokwadi.
Nevanopfuura zviuru zvitanhatu vakapedza kudzidza, yedu iri kukura Corporate Educational Alliances, uye yedu B6,000B kubatana, isu takazvipira kukushandira iwe zvakanaka mushure mekupedza kudzidza kana sewewewe nharaunda. Kushamwaridzana kwako neHodges University kunokosha kwatiri, uye tinoda kunzwa kubva kwauri.
Ruzivo rwako, kungave semudzidzi kana seshamwari, rwakakosha mukukura kwedu uye nekufambira mberi kwedu. Ndokumbirawo mutigadzirire nezvamuri kuita izvozvi uye nenzira dzamunoona nadzo Hodges Yunivhesiti kusimbisa basa rayo munyika yako… uyezve, shanya kazhinji!
Mutsigiri weHodges University anonzwisisa kuti chipo chavo ndechekuchengetedza mhedzisiro mupfungwa. Ndezve kupa rutsigiro runodikanwa, panguva yakakosha zvikuru, kune mumwe munhu, kuti vazadzise chinangwa chavo- chinangwa chinova dombo repakona rekuita kuti hupenyu hwavo nenharaunda yavo ive nani. Isu tese tinoziva kuti dzidzo inogona kushandura hupenyu uye kuti shanduko haiuye isingadhuri.
Asi, iro dhigirii kana chitupa chakawanikwa hachimbofi chakabviswa uye izvo zvakaitwa nemunhu zvakagadzira nhengo nyowani yemunharaunda medu.
Ndiyo rutsigiro rwako, irwo, uye izvo zvichachinja maratidziro ehupenyu.
Hatigone kutenda mumwe nemumwe wenyu zvakakwana nerutsigiro urwu asi ndokumbirawo muzive kuti tichaedza!
Ramba wakachengeteka! Uye ndokumbirawo ugare uchikurukura!
Kugovera musangano wako weHodges University kana kudzidza zvakawanda nezvenzira dzaungatsigire nadzo mudzidzi weHodges University, ndapota nyorera Angie Manley, Director weYunivhesiti Kufambira Mberi, 239.938.7728 KANA email pa amanley2@hodges.edu.
Ndokumbirawo ubaye pane iyi link iripazasi kuratidza rutsigiro rwako nhasi!
NEW - Hodges Batanidza